I-Home Cam Kit esekelwe nge-Raspberry Pi - I-Electronic Components Distributor - Components-Store.com
Ikhaya > Izindaba > I-Home Cam Kit esekelwe nge-Raspberry Pi
I-Home Cam Kit esekelwe nge-Raspberry Pi
I-HKCam idinga i-Pi-Zero W okusajingijolo ngokunikezwa amandla, i-module esemthethweni ye-Raspberry Pi ikhamera, ikhadi le-microSD, nezindlu ze-3D eziphrintiwe.
Uma ungenayo iphrinta ye-3D, unjiniyela we-HKCam, uMat Hochgatterer, uzophrinta i-enclosure ngemali encane.
Lonke ibandla lihlangana ndawonye futhi lizofinyeleleka ngohlelo lokusebenza lwasekhaya lwe-iOS.
I-Hochgatterer inikeza isithombe sediski se-Raspbian esiseduze ukuhamba ukuze ubhale ekhadini le-SD eliqhuba inguqulo eguquliwe ye-HomeBridge.
I-enclosure ye-3D ephrintiwe izosungula ikhamera noma ivumele ukuthi ifakwe eludongeni.
I-Hochgatterer yiyona yonjiniyela ngemuva kwe-app ye-Home 3 iOS.
U-Hochgatterer uye wabeka zonke izinyathelo kwiwebhusayithi yakhe futhi ihambisana nekhasi le-Github ukuze abasebenzisi baphakanyiswe ngokushesha ngemuva kokuthola izingxenye.
A I-Raspberry Pi Zero W, a I-module yekhamera ye-rajberry Pi, futhi a ikhadi le-microSDkonke okutholakala ku-Amazon.